Abaqhubi bevili, abaPhathi bokuPhumela abaPhambili, abaFuduki beVili abaCwangcisiweyo -Jufenglong
Umhlaba ombi weForklift
Self Ukulayisha Umxhubi eziphathekayo
lishishini eligxile kwimveliso yeelayers kunye ne-self-feeder iilori zokuxuba.
Iimveliso zothotho lwe-LEHMAN ezisindayo, zombini ezihambelana nezinto zasekhaya nezamazwe aphesheya ezifanelekileyo, ezinokuthenjwa, ziyahlangabezana neemfuno zobuntu, ivelise iiofisi kumazwe angaphezu kwe-10 kwihlabathi liphela, kwaye iimveliso zayo zithunyelwa kumazwe angaphezu kwama-20 nakwimimandla efana ne-India , lran, Russia, Libya, Vietnam, Tanzania, South Africa, Ethiopia kunye neBrazil.
Inkampani inamandla abanzi abanzi, idibanisa uphando kunye nemveliso, imveliso, ukuthengisa kunye nenkonzo, kwaye ikhokelela ekufumaneni izixhobo ezikhethekileyo zokuvelisa kunye neelayisensi zokuvelisa nge-eu CE certificatin, ISO9001 isiqinisekiso senkqubo esemgangathweni
Ukuzilayisha ilori yokuxuba
Le mveliso inokuthi ithathe indawo yeseti yomvelisi, umlayishi, umxube kunye neetanki. Njengabasebenzi abangaphezulu kwesithandathu, sisizukulwana esitsha sokwenza imveliso ekhokelela kwitanki.
Isakhelo esomeleziweyo, iziko lokuhambisa amandla omxhuzulane lisengqiqweni, linamandla okuthwala amandla.
urhwebo lokuthumela ngaphandle
iimveliso zithunyelwa kumazwe angaphezu kwama-20 kunye nemimandla efana India, lran, Russia, Libya, Vietnam, Tanzania, South Africa, Ethiopia kunye Brazil.
Iiprojekthi zamva nje
Robot izixhobo iwelding oluzenzekelayo ukuqinisekisa umgangatho iwelding, weld ifanitshala ecocekileyo, welding eqinileyo.
inkampani yazisa iJamani Ngokuzenzekelayo ukusika kweLaser kunye nezixhobo ezingenanto kunye neJamani ye-CNC yezixhobo zerobhothi.
Isixhobo sokuxuba seKhonkrithi esizimeleyo esinokuthi ...
Ngomhla wama-26 kuNovemba, 20
Umxube weKhonkrithi oZigcinayo ongenakho ukwaliwa Kule minyaka idlulileyo yeeprojekthi zobunjineli, i-Self Loading Concrete Mixersr iya isiba phezulu. Nokuba zisezidolophini, ezidolophini, okanye ...
Ngaba uyazi iingcebiso ezintandathu ukuze ube yinto elungileyo ...
Umqhubi olungileyo we-Front End Loader unokuyazi ngokucacileyo indlela yokusebenzisa umatshini xa uqhuba umlayishi, ukunciphisa ukunxiba koomatshini, ukunciphisa ukusetyenziswa kwepetroli, kunye nokuwugqiba umsebenzi ngokukhawuleza nangokufanelekileyo. Oku kulandelayo ...
Kukho ngaphezulu kwe-80 ephakathi kunye nabasebenzi bezobuchwephesha abaphezulu kolu shishino, ngaphezulu kwama-700 abasebenzi, kunye neqela elinamandla lophando lwenzululwazi luqinisekisile uphando oluzimeleyo lwenkampani kunye nophuhliso, ngakumbi intsebenziswano yexesha elide wle clleges neyunivesithiIngoko, umgangatho ophezulu iqela lweshishini lakhiwa.
FUMANA IFOMU YEKOTA
Izinto ezintsha zitshintsha igama, umgangatho udala ikamva! I-Shan Yi oomatshini be-LTD, ebekwe eLaizhou, kwiphondo laseShandong, yasekwa ngonyaka we-1990s. Inkampani igubungela ummandla we-4000 sqm kwaye ine-workshop yemveliso yeemodem ye-20000 sqm enotyalo-mali olupheleleyo lwe-200000000 yuan, lishishini eligxile ukuveliswa kweelayers kunye neelori zokuxuba ezizondla ngokwakho. Ivelisa iiloli ezingama-50000 kunye neelori ezingama-8000 zokuxheshisa ezizisebenzelayo
Iziganeko zamva nje
Iimpawu zeShanyi Lehman
Nge-14 ka-Agasti, 20
Self-kulayishwa Umxhubi Iinkuphelostencils, Ikhonkrithi yokuThulula iKhonkrithi, 2021d ivili Loader, IiCompact zaVala iiVili, Amazwe amakhulu kunawo onke angaphambili, Iivili zeVili zeBell,
Idilesi: Shahe Industrial Park, kwisiXeko saseLaizhou, kwiPhondo laseShandong